जनभावनाको कदर गरौं, 'सान्दर्भिक, कोरा र अपुरो'Nepalpana - Nepal's Digital Online
जनभावनाको कदर गरौं, 'सान्दर्भिक, कोरा र अपुरो'
आश्विन १५ २०७७
नेपाल र भारतका जनताको सदियौं पुरानो सम्बन्ध भएकाले यस कोरोना महामारीबाट बच्न दुवै देशको संयुक्त रणनीति हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। कोरोना महामारीलाई दुई देश मध्ये कुनै एक देशले मात्र नियन्त्रण गर्ने रणनीति र योजना तर्जुमा गरेमा त्यो असान्दर्भिक, कोरा र अपुरो हुनेछ।
नेपालमा वर्तमान सरकारलाई अहिले ऐतिहासिक अवसर जुटेको छ। देशमा लामो प्रयास पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ट बहुमतको सरकार गठन भए तीन वर्ष लाग्न लागेको छ। सरकारको नेतृत्व के पी शर्मा ओलीले गर्नु भएको छ। प्रस्ट बहुमतको सरकार भएता पनि काम गर्ने तौर तरिकामा कुनै उल्लेख्य जनमुखी नीति रणनीति छैन।
कोरोना महामारीलाई मौका र अवसर छोपी स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा करोडौको अनियमितता भएको छ। सरकारले सबै क्षेत्रमा ठूलो विरोधको सामना गर्नु परेको छ। सरकारले जनताको भावनाको वेवास्था गरेको भनी व्यापक विरोध भएको छ। जनमुखी योजना र कार्य गर्ने विभागिय प्रमुख, डाक्टर, समाजसेवी, वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्तालाई सरकारले तिरस्कृत गरेको छ।बहुमतको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत झै भएको छ।
कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएर यतिखेर विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ। संसारका सबै राष्ट्रहरू कोरोना महामारीबाट बच्न आफनो देशको रणनीति अनुसार क्रियाशील र व्यस्त छन्।दक्षिण पूर्व एशियाली राष्ट्र नेपाल र भारतमा पनि यस भाइरसले महामारीको रूप लिदै गएको छ। नेपाल, भारतमा बसोबास गर्ने मानिसको अन्तरदेशीय सम्बन्ध रहेको र दुवै देशका मानिसहरूको मिश्रित बसोबासका कारणले मानिसहरू नेपाल भारत आवतजावत गरि रहनु पर्ने हुन्छ। नेपाल र भारतका जनताको सदियौं पुरानो सम्बन्ध भएकाले यस कोरोना महामारीबाट बच्न दुवै देशको संयुक्त रणनीति हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। कोरोना महामारीलाई दुई देश मध्ये कुनै एक देशले मात्र नियन्त्रण गर्ने रणनीति र योजना तर्जुमा गरेमा त्यो असान्दर्भिक, कोरा र अपुरो हुनेछ।
नेपाल र भारतमा अहिले प्रष्ट बहुमतको सरकार गठन भएको छ। भारतमा भारतीय जनता पार्टीको प्रष्ट बहुमतको सरकार छ भने नेपालमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रष्ट बहुमतको सरकार गठन भएको छ। भारतमा कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न भारत सरकार ठोस योजना र रणनीति अनुसार सक्रिय छ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्छ र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्न सर्वसाधारण, असहाय, गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ भनी दर्जनौं पटक आमरण भोक हडतालमा बस्नु बाँध्य भएका डाक्टर गोविन्द केसी को आवाजलाई तिरस्कार गरिएको छ। डा. केसीको माग प्रति सरकार बेखबर छ। डा. केसी अहिले पनि सत्याग्रहमा नै हुनुहुन्छ र अहिले डा ।केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक भएकाले उपचारको लागि नेपालगन्ज ल्याइएको छ। उज्यालो नेपालका हिमायती प्रशासक कुलमान घिसिङ्गको पुनर्बहालीको मागको वेवास्था गरेर सरकारले जन् विश्वास गुमाएको छ ।
नेपालमा वर्तमान सरकारलाई अहिले ऐतिहासिक अवसर जुटेको छ। देशमा लामो प्रयास पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ट बहुमतको सरकार गठन भए तीन वर्ष लाग्न लागेको छ। सरकारको नेतृत्व के पी शर्मा ओलीले गर्नु भएको छ। प्रस्ट बहुमतको सरकार भएता पनि काम गर्ने तौर तरिकामा कुनै उल्लेख्य जनमुखी नीति रणनीति छैन। कोरोना महामारीलाई मौका र अवसर छोपी स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा करोडौको अनियमितता भएको छ। सरकारले सबै क्षेत्रमा ठूलो विरोधको सामना गर्नु परेको छ। सरकारले जनताको भावनाको वेवास्था गरेको भनी व्यापक विरोध भएको छ।जनमुखी योजना र कार्य गर्ने विभागिय प्रमुख, डाक्टर, समाजसेवी, वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्तालाई सरकारले तिरस्कृत गरेको छ। बहुमतको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत झै भएको छ।
सरकारले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। तर, सरकारले असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाई रहँदा तराईवासी, आदिबासी, जनजाति र दलित ले अधिराज्य भरी विरोधमा उत्रिएको छ। लाखौं लाख जनता वर्तमान संविधानको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले विरोधको सामना गर्नु परेको छ। सरकार भने यही संविधानलाई निर्विकल्प ठानी पर्वको रूप मानी विभिन्न प्रकारका राष्ट्रिय गतिविधिमा व्यस्त छ। राष्ट्रिय गतिविधिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा सरकारको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रश्न खडा भएको छ। जहिले पनि नेपालको दक्षिणी सिमानामा मात्र ध्यान केन्द्रीकृत गर्ने ओली सरकारले उत्तरी सिमानाको बारेमा बेखबर भएको छ।
नेपालको उत्तरी जिल्ला हुम्लाको नांखा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ को लिमी गाउँको लाप्चाक्षेत्रमा चीन सरकारले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी नौ ओटा पक्की भवन निर्माण गरेको छ। अतिक्रमित भूभागको निरीक्षण गर्न हुम्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङ, उपाध्यक्ष पेमा तामाङ, ओडा अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ, प्रहरी प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख र सोही पालिकाका प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले अतिक्रमित भूभागको अवलोकन निरीक्षण गरेका छन्। अतिक्रमित नेपाली भूभाग के कति छ भनी सो को रेखाङ्कन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ।
अखबारमा समाचार प्रकाशन नहुन्जेल चुप लागेर बस्ने र अतिक्रमण भएको सूचना अखबारमा आएपछि मात्र चासो देखाउने सरकारी सोचले जनमानसमा सरकार प्रति नै थप शंका पैदा गराएको छ। सरकारी कर्मचारी आफ्नो नुन को सोजो गर्न मात्र अनुगमन र निरीक्षणमा गएको त होइनन् भनेर आम नागरिकमा जिज्ञासा पैदा भएको छ। पत्रपत्रिकामा आएको समाचारको आधारमा चीनबाट अतिक्रमित भूभाग त थाहा भयो तर उत्तरी विकट हिमाली क्षेत्रमा अन्य भूभाग पनि ठूलो मात्रामा अतिक्रमित भएको ता छैन ?
विश्वमा आएको संक्रमण र महामारीको यस विषम परिस्थितिमा चीन सरकारले केरुङ तातोपानी नाका बन्द गरेर नेपाल प्रतिको चीनको असली दृष्टिकोण र व्यवहार छर्लङ्ग पारेको छ।चीनले नाका बन्द गरे पछि ठूलो मात्रामा नेपाल आउनुपर्ने स्वास्थ्य सामाग्री बोकेका कन्टेनर सडकमा नै अलपत्र परेका छन्। बालबालिकामा लगाइने खोप का लागि अतिआवश्यक पर्ने ११ लाख थान सिरिन्ज केरुङ नाकामा अलपत्र परेको छ।अरबौंका स्वास्थ्य सामाग्री गोदाममा नै थन्किएका छन।
वर्तमान नेकपाको बहुमतको सरकार आन्तरिक बिबाद र अस्थिरताको दलदलमा फँसेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै कुहिरोमा भौतारिएको काग जस्तै भएको छ। वर्तमान सरकार जनभावनाको कदर गर्नुको साटो मनको भावनामा बहकिएको छ।दशकौ वर्ष अगाडि देखिको नेपाली जनताको आसा,अपेक्षा र भरोसामा ठेस लागेको छ। संभारः हाम्राे दमकबाट
आश्विन १५, २०७७ बिहिवार १२:५६:०१ बजे : प्रकाशित